कोभिड संक्रमणसँग जुधिरहेकी ९२ वर्षीया लता मंगेशकरको स्वास्थ्य अहिले कस्तो छ ? « Etajakhabar
कोभिड संक्रमणसँग जुधिरहेकी ९२ वर्षीया लता मंगेशकरको स्वास्थ्य अहिले कस्तो छ ?
एजेन्सी । ९२ वर्षीय गायकलाई कोभिड भाइरसको हल्का लक्षण देखिएपछि गत हप्ता दक्षिण मुम्बईको ब्रीच क्यान्डी अस्पतालको आईसीयूमा भर्ना गरिएको थियो। डाक्टरहरुका अनुसार लता जीलाई अहिले हेरचाहको आवश्यकता छ, त्यसैले उनलाई आईसीयूमा राखिएको छ ।
संक्रमणसँग जुध्दै आएकी चर्चित गायिका लता मंगेशकर मुम्बईको क्यान्डी अस्पतालको आईसीयूमा चिकित्सकको निगरानीमा छन् । उनको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले शनिबार सो जानकारी दिएका हुन् । डाक्टरले उनलाई अहिले हेरचाह आवश्यक रहेको भन्दै आईसीयूमा राखिएको बताएका छन् । लता मंगेशकरलाई कोभिड र निमोनिया दुबै भएको छ ।
लता मंगेशकर आईसीयूमा छिन्
९२ वर्षीय गायकलाई कोभिड भाइरसको हल्का लक्षण देखिएपछि गत हप्ता दक्षिण मुम्बईको ब्रीच क्यान्डी अस्पतालको आईसीयूमा भर्ना गरिएको थियो। लता मंगेशकरका डा प्रतत समदानीले गायिका केही समय अस्पतालमै रहने बताए । उहाँ अझै आईसीयूमा हाम्रो निगरानीमा हुनुहुन्छ। हामीले पर्खनुपर्नेछ। उहाँहरूको स्वास्थ्य लाभको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्, उनले भने ।
उल्लेखनीय छ कि लता मंगेशकरको घरमा काम गर्ने एक सहयागीको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको थियो, त्यसपछि लता मंगेशकरको पनि परीक्षण गरियो र उनको रिपोर्ट पनि पोजेटिभ आएको थियो। यसअघि दिग्गज गायकलाई श्वासप्रश्वासमा समस्या भएपछि नोभेम्बर २०१९ मा अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । उनलाई २८ दिनसम्म अस्पताल भर्ना गर्नुपरेको थियो ।
सात दशक लामो आफ्नो करियरमा लता मंगेशकरले विभिन्न भाषामा ३० हजारभन्दा बढी गीत गाएकी छिन् । सन् २००१ मा उनलाई भारतको सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘भारत रत्न’ प्रदान गरिएको थियो । उनी सन् १९८९ मा दादासाहेब फाल्के अवार्डबाट पनि सम्मानित भइसकेका छन् ।
फोक्सो लाई ७२ घण्टामा आफैं सफा गर्ने यस्तो घरेलु उपाय, पढ्नुहोस् र जानकारीको लागी सेयर गर्नुहोस्
रुघाखोकी, ज्वरो, टाउको र राति सुत्नै नसक्ने गरी जिउ दुख्ने गरेको छ तर पीसीआर गर्न